Xinhua Myanmar - ဘိုင်ဒန်က ကော်လိုရာဒိုပစ်ခတ်မှုအား ပြစ်တင်ရှုတ်ချ ၊ လက်နက်ကိုင်ဆောင်ခွင့်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးဥပဒေကြမ်းကို အတည်ပြုရန် လွှတ်တော်အားတိုက်တွန်း
အမေရိကန်နိုင်ငံသမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်က ဖေဖော်ဝါရီ ၂၁ ရက်တွင် ပြုလုပ်သည့် မြူးနစ်လုံခြုံရေးညီလာခံသို့ ဝါရှင်တန်မြို့မှနေ၍ ဗီဒီယိုရုပ်သံမှတစ်ဆင့် တက်ရောက် မိန့်ခွန်းပြောကြားစဉ်(ဆင်ဟွာ) North America
“ လူ ဆယ်ယောက် အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ် ၊ ကော်လိုရာဒိုမှာ သေနတ်ပစ်ခတ်မှုကြောင့် ကြေကွဲခံစားရတဲ့ မိသားစုတွေပိုများလာတယ်” ဟု ဘိုင်ဒန်က အိမ်ဖြူတော်၌ ပြောကြားခဲ့သည်။ “ ကျွန်တော်နဲ့ ကျွန်တော့်ဇနီး Jill တို့ဟာ တကယ်ကိုစိတ်ထိခိုက်ခဲ့ရတယ်။ ဒီခံစားချက်ဟာ အမှန်တကယ် အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့မိသားစုဝင်တွေ ဘယ်လိုထိခိုက်ကြေကွဲနေမလဲဆိုတာကိုတော့ မဖော်ပြနိုင်ပါဘူး ” ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။
ပြီးခဲ့သော တနင်္လာနေ့မွန်းလွဲပိုင်းက ကော်လိုရာဒိုပြည်နယ် Boulder မြို့ရှိ King Soopers စားသောက်ကုန် စတိုးဆိုင်တစ်ခုတွင် အသက် ၂၁ နှစ်အရွယ် Ahmad Al Aliwi Alissa အမည်ရလူငယ်တစ်ဦးက သေနတ်ပစ်ခတ်မှု ကျူးလွန်ခဲ့ရာ ၎င်းအခြေအနေအား ပထမဆုံး တုံ့ပြန်ကိုင်တွယ်သည့် ရဲအရာရှိတစ်ဦးအပါအဝင် လူ ၁၀ ဦး အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။
ယင်းပစ်ခတ်မှုသည် ဂျော်ဂျီယာပြည်နယ် အတ္တလန္တာဒေသ၌ အာရှနွယ်ဖွား အမျိုးသမီးအများစုပါဝင်သော လူ ၈ ဦး အသတ်ခံရပြီးနောက် တစ်ပတ်မျှပင်မကြာသေးခင် ထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ပစ်ခတ်မှုအတွင်း အသက် ၅၁ နှစ်အရွယ် ရဲအရာရှိ Eric Talley နှင့် အခြားသေဆုံးသူ ၉ ဦးမှာ မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်းကို ရဲတပ်ဖွဲ့က မတ် ၂၃ ရက် နံနက်ပိုင်းတွင် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
ဘိုင်ဒန်က သေဆုံးသွားသည့် ရဲအရာရှိအား သူရဲကောင်းအဖြစ် ချီးကျူးဂုဏ်ပြုခဲ့ပြီး မကြာသေးခင်က (House) လွှတ်တော်တွင် အတည်ပြုခဲ့သည့် လက်နက်ကိုင်ဆောင်ခွင့် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးဥပဒေကြမ်းကို (ဆီးနိုတ်) လွှတ်တော် အနေဖြင့် အလျင်အမြန် ပြဌာန်းပေးရန် တိုက်တွန်းခဲ့သည်။
“ ကျွန်တော်နောက်ထပ် စောင့်ဆိုင်းဖို့မလိုအပ်တော့ဘူး ၊ ရှေ့ဆက် လူ့အသက်တွေကို ကယ်တင်နိုင်အောင် တူညီတဲ့ခြေလှန်းတွေနဲ့ အချိန်းမဆိုင်းလုပ်ရတော့မှာပါ ” ဟု ပစ်ခတ်မှုအတွင်း သေဆုံးသွားသူများအတွက် ဝမ်းနည်းကြေကွဲခြင်း အထိမ်းအမှတ် အလံတစ်ဝက်တင် ဂုဏ်ပြုရန် အမိန့်ထုတ်ပြန်ပြီးနောက် မိန့်ခွန်းပြောကြားစဉ် ဘိုင်ဒန်က ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့သည်။
“ ဆီးနိုတ်လွှတ်တော်အနေနဲ့ ဥပဒေကို အလျင်အမြန်ပြဌာန်းသင့်ပါတယ် ၊ အမေရိကန် ဆီးနိုတ်လွှတ်တော်ခင်ဗျား ကျွန်တော့်ကိုနောက်တစ်ကြိမ်ပြောခွင့်ပြုပါ ၊ တစ်ချို့လူတွေနားထောင်နေကြမယ်လို့ ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်။ အားနည်းချက်တွေကို သုံးသပ်မှု အပြီးတိုင်လုပ်ပြီး လွှတ်တော်နှစ်ရပ်စလုံးအနေနဲ့ ဒီဥပဒေကို အလျင်အမြန်ပြဌာန်းသင့်ပါတယ် ၊ ဒီဥပဒေကြမ်းတွေဟာ ရီပတ်ဘလီကန်ပါတီရော ဒီမိုကရက်ပါတီပါ မဲရထားတဲ့ ဥပဒေကြမ်းတွေပါ ၊ ဒါဟာ ပါတီအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုတည်းရဲ့ ကိစ္စရပ် မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါဟာ အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့အရေးကိစ္စပါ၊ လူ့အသက်ကို ကယ်တယ်ဖို့ပါ။ အမေရိကန်တွေရဲ့အသက်ကို ကယ်တင်ဖို့ ၊ ကျွန်တော်တို့ ဒါကိုလုပ်ရမယ်” ဟု ဘိုင်ဒန်က ဖြည့်စွက်ပြောကြားခဲ့သည်။
ယခုလအစောပိုင်းက (House) လွှတ်တော်သည် Checks Act and Enhanced Background Checks Act ဥပဒေကြမ်းအား နှစ်ပါတီထောက်ခံမှုဖြင့် အတည်ပြုခဲ့သည်။ ရီပတ်ဘလီကန်ပါတီ၏ ထောက်ခံမှု အနည်းငယ်နှင့်အတူ ယင်း ဥပဒေကြမ်းနှစ်ခုစလုံးအား ပါတီထောက်ခံမှုမဲအများစုဖြင့် အတည်ပြုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီက ရီပတ်ဘလီကန်ပါတီတွင် သေနတ်ပစ်ခတ်မှုနှင့်ပတ်သက်၍ ဖြေရှင်းရန် အဖြေမရှိကြောင်း စွပ်စွဲနေပြီး သေနတ်ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားချိန်တိုင်းတွင် လက်နက်ထိန်းချုပ်ရေးကို တွန်းတင်ရန်အတွက် ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီဝင်များက အကြောင်းရှာ ပြစ်တင်မှုလုပ်နေကြောင်း GOP ဆီးနိုတ်လွှတ်တော်အမတ်များက ပြန်လည်တုံ့ပြန်နေသဖြင့် အင်္ဂါနေ့တွင် ဆီးနိုတ်လွှတ်တော်၌ ဆက်လုပ်မည့် လက်နက်ထိန်းချုပ်ရေးဥပဒေကြမ်းနှင့်ပတ်သက်၍ ကြားနာမှုသည် ကောင်းမွန်သောအစပြုမှုအဖြစ် ရည်ရွယ်ထားကြောင်းလည်း သိရသည်။ (Xinhua)
WASHINGTON, March 23 (Xinhua) -- U.S. President Joe Biden on Tuesday said he was "devastated" by the shootingaday earlier atagrocery store in Boulder, Colorado, that killed 10 people, urging the Senate to immediately pass the bills on gun reform recently approved by the House.
"Ten lives have been lost, and more families have been shattered by gun violence in the state of Colorado," Biden said in remarks from the White House. "And (first lady) Jill and I are devastated, the feeling, I just can't imagine how the families are feeling."
On Monday afternoon,ashooter identified Tuesday as 21-year-old Ahmad Al Aliwi Alissa opened fire at the King Soopers grocery store in Boulder, Colorado, killing 10 people, among themapolice officer who was the first to respond to the situation.
"I don't need to wait another minute, let alone an hour, to take common sense steps that will save lives in the future," said Biden, who shortly before the speech ordered that flags be flown at half-mast to honor the victims.
"The Senate should immediately pass, let me say it again, the United States Senate, I hope some are listening, should immediately pass the two House-passed bills that close loopholes in the background check system. These are bills that received votes with both Republicans and Democrats in the House. This is not and should not beapartisan issue. This is an American issue. It will save lives. American lives. We have to act," Biden added.
Earlier this month, the House passed the Bipartisan Background Checks Act and Enhanced Background Checks Act, respectively. Both of the bills passed almost by party-line votes, with very few Republicans' support.
Also on Tuesday, the atmosphere of an ongoing hearing on gun control in the Senate grew intense right at the beginning, as Democrats accused Republicans of having no solution for gun violence and GOP senators fired back by blaming the Democrats for pushing gun reform every timeashooting incident happened. Enditem
Previous Article အမေရိကန်နိုင်ငံ ဗာဂျီးနီးယားကမ်းခြေ၌ ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွား ၂ ဦးသေဆုံး ၊ ၈ ဦးဒဏ်ရာရ
Next Article အမေရိကန်နိုင်ငံ ကော်လိုရာဒိုပြည်နယ်၌ ပစ်ခတ်မှုကြောင့် လူအများအပြားသေဆုံး